Thenga i-Bitcoin e-Nigeria Ngokushesha Nangokuphephile | Paxful
Thenga Futhi Uthengise I-Bitcoin (BTC) eNigeria
Vikela imali yakho ku-Naira ehlulekayo futhi ubeke ngokuphephile imali yakho ku-Bitcoin. Thenga i-Bitcoin nganoma iyiphi indlela yokukhokha kuhlanganise i-Amazon Gift Card, i-iTunes Gift Card nokuthunyelwa kwemali ngebhange!
Ama-Bitcoin angaphezu kwangu-1000 asethengisiwe kakade eNigeria!
Bukela ividiyo echaza indlela okulula ngayo kuthenga i-Bitcoin
Imali Yeselula ye-MTN
Chofoza lapha ukuze ubone konke ongakhetha kukho
300 izindlela zokukhokha
1. Khetha indlela yokukhokha phezulu
Khetha ezindleleni eziphezulu zokukhokha eNigeria. Noma uthole noma iyiphi enye indlela yokukhokha ekukhetheni okungezansi kwezindlela eziphezulu.
2. Thayipha inani lakho
1. Hamba uyothenga amakhadi esipho ngemali esitolo sasendaweni esinjenge-Blessings Computer noma i-Konga.com.
2. Khetha indlela yokukhokha ngenhla futhi uthayiphe ukuthi yimalini onayo ekhadini bese uchofoza okuthi "Thenga i-Bitcoin manje". Iwindi elisha livuleka nokuthengiswayo okukhethwa yi-Paxful (okungcono okuthengiswayo).
3. Funda imigomo yokuthengiswayo bese uqala ukuhweba. Faka izithombe zengemuva lekhadi elixebuliwe kanye nerisidi. Qiniseka ukuthi wenza ikhadi lisebenze kuqala! Chofoza inkinobho ethi "Ngizilandele iziqondiso" bese uyamlinda akhulule i-Bitcoin.
1. Khetha Ukudluliswa Kwemali Ebhange bese uthayipha inani ongalisebenzisa ngenhla. Umdayisi uzokusiza ufake imali esikhwameni sakho semali se-Bitcoin ku-Paxful.
2. Landela iziqondiso ukuze udlulise imali isuka ku-akhawunti yakho yasebhange iya kumdayisi. AKUKHO NKOKHELO ESHESHAYO YEZISEBENZI ZASEBHANGE, AKUKHO KUTHUNYELWA KWEMALI KU-ATM.
3. Lapho ukuthunyelwa kwemali sekwenziwe, chofoza inkinobho ethi "Ngizilandelile iziqondiso" bese uyamlinda akuthumelele i-Bitcoin.
4. I-Bitcoin iba khona ngokushesha esikhwameni sakho semali se-Paxful futhi ingathunyelwa noma kuphi emhlabeni ngokushesha.
Thenga nge-Western Union / MoneyGram
1. Khetha i-Western Union noma i-MoneyGram futhi uthayiphe inani ongalisebenzisa ngenhla. Umdayisi ozokusiza ufake imali esikhwameni sakho semali se-Paxful.
2. Landela iziqondiso zakhe ukuze uthemele imali. Ungase ulinde i-Western Union isikhathi eside kodwa umdayisi we-Paxful ngeke akulindise.
Thenga nge-Western Union
Siza abantu baseNigeria bathole i-Bitcoin futhi bathole inzuzo ENKULU efinyelela ku-60% isikhathi ngasinye bethenga. Qala ukuthengisa nge-akhawunti yakho yebhange yaseNigeria, bona umhlahlandlela wethu wamahhala. I-Paxful ithola abathengi be-Bitcoin abavela eNigeria abangaphezu kuka-1000 nsuku zonke.
Ingabe wazi abantu abaningi abafuna ukuthenga i-Bitcoin eNigeria? Nge-Bitcoin Kiosk kanye Nohlelo lomxhasi uzuza 2% ekuhwebeni ngakunye phakade ngokwabelana nje ngelinki. Qala manje.
I-Bitcoin iyimali eyidijithali kanye nendlela yokukhokha. I-Paxful yenza kube lula ukushintsha amakhadi akho esipho abe yi-Bitcoin. I-Bitcoin isiyimali eyidijithali ebalulekile ezimalini eziyidijithali. Ungayibheka njengegolide eliku-inthanethi. Njengegolide, intengo ye-Bitcoin iyashintshashintsha futhi kulindeleke ukuba intengo ye-Bitcoin ikhuphuke, ikakhulukazi lapho ezomnotho zinzima.
Ukuze ubone uhlu oluhle lwabathengisi abamukela i-Bitcoin yiya ku-https://spendabit.co/merchants.
Imishini yezobuchwepheshe - NewEgg
Imakethe entsha ye-Bitcoin igxila eNigeria
Ukuthenga nokuthengisa i-Bitcoin kwenziwe lula yi-Paxful